Karabagh-Ambony : Ahoana no hampironana ny olona hijery ny tena zavamisy iainana ? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Febroary 2020 5:18 GMT
Nanomboka ny 1991, fotoana voalohany nanehoan'ireo foko armeniàna ny hetahetany hahaleo tena, ary hatramin'ny 1994, ady telo no efa nifanandrinan'ireo « Tatars» nitoetra teny an-dohasaha, antsoina ankehitriny hoe Azeris tamin'ireo armeniàna mponina an-tendrombohitra, saropiaro amin'ny fakàna ny tany izay nolavina hatrany tsy ho azy ireo. Tamin'ny 1994, nisy ny fanaovana sonia fampitsaharana ady izay tsy mbola tonga aminà fifanarahana fandriampahalemana hatramin'izao, ary izany dia na teo aza ny fifampiraharahàna nandraisan'ny vondrona Minsk, iarahan'i Etazonia, Rosia sy Frantsa nitantana tamin'izany fotoana izany. Toy ny ngoly ilay fifandonana, na kely aza, tsy nisy vahaolana politika nentina hanafay ireo anton'ny maha-lian'ady.
« Na eo aza ny fahasamihafantsika any amin'ireo faritra hafa eto amin'izao tontolo izao, katsahantsika ny handrindra ny diplaomasiantsika momba an'i Karabagh », hoy i Erevan James Warlick, Amerikàna mpiara-mitantana ny vondrona Minsk ao amin'ny OSCE, namerina nanamafy mba hanehoana fa i Etazonia sy Rosia dia nanohy ny ezaka nataon'izy ireo hikatsahana vahaolana amin'io fifandonana io, izay efa naharitra loatra, niteraka fahafatesana an'arivony marobe nandritra ireo taona nifandimby ary mpitsoaponenana an'aliny maro avy amin'ny andaniny sy ny ankilany.
Ankoatra izay, mba hahafantarany misimisy kokoa ny fiarahamonina sy ny andrimpanjakana Karababh, Frantsa dia nandefa iraka iray ahitàna parlemantera frantsay efatra, ny 8 hatramin'ny 12 Septambra, mba hamita iraka arahan'asa tany Karabagh-Ambony, tsy isalasalàna fa hevitra nanosika izany ny mba hahafahana miditra an-tsehatra anatin'ireo fifampiraharahàna, tsy itompoana teny fantatra. Satria izany dia hitondra ho amin'ny fahatsapàn'ny hafa hoe voabaikon'ny fiombenambe iraisampirenena amin'izay làlana tokony hizorany hikatsahana fandriampahalemana ka mety vao mainka hampiziriziry ny tsirairay avy.
Mizotra mankamin'izany ny fandalinan'ilay rosiàna mpandalina pôlitika, Andreï Arechev :